Isiguquli, isiGuquli soSasazo, isiGuquli esine-oyile-eFuda
Inombolo ye-88 Huanghe, indawo ye-high-tech, isixeko saseLiaocheng, kwiphondo laseShandong, e-china
Uhlobo olomileyo loGuquli
Isiguquli seOyile egxile emanzini
Siyakholelwa ukuba okoko nje uyayiqonda imveliso yethu, kufuneka uzimisele ukuba ngamaqabane nathi.
Le nkampani iye yasekwa ngo-2000. Emva kweminyaka elishumi iinzame kunye nophuhliso, iye yaba ishishini elikhulu-isikali kwiphondo.
I-5kV isiguquli kunye nesiguquli esilandelayo seS9, iS11 sombane sombane sombane sombane sombane sombane:
Inkampani iphumelele ngempumelelo uvavanyo lwenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001 / 2000 ephicothwe yinkampani yeMody ngoJanuwari 2010
I-Shandong Fuda Transformer Co, Ltd. ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo emva kwenkonzo yokuthengisa evela kwinkonzo yenkonzo, ukujonga rhoqo, ukugcinwa kunye nokulungiswa.
I-Shandong Fuda Transformer Co, Ltd.yishishini eligxile kwimveliso, uphuhliso kunye nokuthengisa kwezinto ezomileyo zohlobo lwesiguquli, isiguquli samandla, isiguquli se-oyile egxile, isiguquli se-amorphous alloy, isiguquli se-10kV, 35kV abaguquli, abaguquli bebhokisi kunye neemveliso ezixhasayo.
Ezona mveliso ziphambili zenkampani: 35kV isiguquli kunye nesiguquli esilandelayo seS9, S11 sombane sombane sombane sombane sombane sombane sombane: SGB, SCB series resin insulation insulation dry type transformers; Iziguquli zangaphambi kokufakwa (iYurophu, iMelika), abaguquli abakhethekileyo, njl.
Izixhobo ezigqibeleleyo zenkampani kunye netekhnoloji yokuvelisa, uvavanyo olungqongqo luthetha, amandla oqinileyo ezobuchwephesha, imeko yesayensi kunye nengqongqo yoyilo, ukuqinisekisa ukubonelela abathengi ngokugqwesa, umgangatho onokuthenjwa, ukusebenza ngokugqwesileyo kweemveliso zombane.
Uhlobo lwaseMelika lwesiguquli sebhokisi
Uhlobo lwaseYurophu lokuguqula ibhokisi
SH15 series ingxubevange amorphous zifakwe ngokupheleleyo tran ...
I-14 ka-Epreli 2020, ngokwamaxwebhu apapashwe kwiwebhusayithi esemthethweni yeShandong Supervision Bureau yoLawulo lwezaMandla kaRhulumente- isigqibo seShandong Supervision Bureau ye-State Energy Administration ukunika ilayisensi yolawulo (Shandong Supervision quali .. .
Kwiminyaka yakutshanje, impumelelo ebonakalayo yenziwa kuphuhliso lwamandla amatsha kwihlabathi liphela, kwaye nophuhliso lweshishini lamandla amatsha eliboniswe ngumzi mveliso wokuvelisa amandla we-photovoltaic ungene kumzila okhawulezayo. Iminyaka engama-31 yamava amandla transmi ...